MTJaarraa's Space ~ This is Mohammed Teklu Jaarraa's Personal Blog
Yaa ilmaan Saba kiyyaa gara tokkummatti wal waama. Tokkummaa labasa labsii dabarsaa! Akka nama Oromoo tokko tti yeroo hunda kan na yaachisu wal dhagahu dadhabuu keennaa fi nama humna qabneef humna taane Ofiin wal gabroomsuudha. Tokkumma yoo isiniin jedhu gabroomfata osoo argitan gad jedhaa fi miti ofii keessani wal hambifadha, waliif quuqama jechuufi malee!
Oromiyaa jechi jedhu addunyaa guututti kan bakka bu’u dachii badhaatu magariisa taate dha.
Jechi Oromoo jedhu immoo ummata tokkummaa qabu kan afaan tokkoon dubbatu fi wal hubatu. Saba bara addunyaan qaroominni hin qabanetti Diimokiraasi qulqulluun bulutti nu beeku. Osoo waa hundaa argitan akkamitti garee siyaasatif jecha Oromummaa dagattani?
Waamichi keennaa humna qabnuun ammas tokkumma tahu qaba.
Gabrummaa hundeen buqqifna, dadhabnus ilmaan itti guddifnaa
Dhugaadha ilmaan galma kanaaf sochitti jiru garuu gareen Siyaasa ummata gargar qoodu tti jira. Rabbii diinaa Oromoo kamuu hin milkeessin.
Continue reading “Tokkumma Cimsaa!”
Lafa dhugaan hin jirretti namaan falmuuf yeroo hin qabnu.
Obsa fi waa barachurrattii jabaachudha falli jiru.
Rabbiif malee namaaf bakka hin qabu. Insha Allah gaaf tokko dubbuchuudha jirra hunda. Rabbi nama hin gatu. dhugaanis awwaalamee hin hafu.
Irri kee midhaaga
Keessi kee waan biraa
Isa hundaan firaa
Yaa dubbi micciiraa
Yeroo ammaa kana odeessitun lakkoofsan heddumaata jirti. Namni Kijibu duraan nama hundaan jibbama amma garuu martuu akka waan kijiba aada godhatee namatti fakkaata. Dubbiin tun akkam jechuun hafe jira waan dhagahee ykn “online” tti arge hafarsuu malee dursa addaan baafachuuf yeroo hin qabu. Nama akkana waa lama dhoorgu tti jiran warri beeka kaayyoo ofiitif itti fayyadaman. Waan inni jaalatu tuqanii gammachiisu ykn waan inni jibbuu dubbatanii mufachiisu. Duula waa addaan baafadha eegala namoota akkana gorsaa jenna. Yoomillee dhugaaf dhaabbanna! Natu beekan nun baasu hayyuu keenna dhageefanna. Kan hin beekne gorfanna. Toltuu waliif yaada tokkummatti wal waama. Meeshaan diinni keenna har’dhaa fi kaleessaa inni humna hin qabne humna godhatee ittiin nu fixutti jiru. Kan beeka nu miidhan muraasa fi kan waa addaan baafachuuf dadhabaa hedduu tahuu hin dagatina!
Gareen dhiisa gara waan nu fayyadu woyitti goraa waanuma kamuu keessatti.
Continue reading “Odeesituu Baraa”
Nama miidhun cubbuudha!
Yoomillee taanan namaaf waanuma gaarii yaadudha. Namni waanuma facaafate haamata. Barri keessa jirru kun bars hojiin kamuu harka irratti Galata namaaf deephu. Raajidha kun! Martuu waanuma facaafatan haamachutti jirani. Kumaatama yeroodhaf sobuun salphaadha cubbuun garuu Galata deebisuuf oolte hin bultu
Seenaa qabsoo Oromoo of duuba deebinee yoo ilaalle haalli keessa dabree nu dhaqabe wal arrabsuu fi wal tuffachuu akka hin taane beeku qabna.
Wal tuffachuu fi wal irratti duulun ofumaan of gabroomsuudha. Namni dhugaa akkana ibsee fi tokkumma ummata keennaatif dhaabbate guyyaa tokko akka hin bulle arginee jirra. osoo beeknu maalif daganna?
Hanga Yoomitti Wal Arrabsitu?
Garee dhiisa gara tokkummatti koottaa.
Kana jechuun kiyyaa hattuufi gantuu isaan kalee ummata keenna miidha turan ammas itti jiran jalatti jilbiifadha juchuufi miti ofii keessani wal hin tuffatina harkaan wal hin kuffisnu jechuu barbaade ti.
Posted byMTJara January 31, 2021 January 31, 2021 Posted inUncategorizedLeave a comment on Wal hin Arrabsina!
Yaa Rabbii nama ilma namaatif bu’a buusu nu taasisi.
Hamaa fi hamtuu nurraa qabi.
Lafa Garaan keenna yaaden nu gahi.
Qananii ganda lamaanitu nuuf kenni!
Posted byMTJara December 27, 2020 Posted inUncategorizedLeave a comment on MRGJ